၁၀:၂၉၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ
၀၈:၁၂၊ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၀:၂၉၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
(က) ခန္ဓာ ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(ခ) သစ္စာ (၄) ပါး နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(ဂ) အတွေ့အထိနဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(ဃ) မှတ်သားမှု နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(င) အကြံအစည် နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(စ) နှလုံးသွင်းမှု နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(ဆ) မိုက်မဲသူများနှင့် ပေါင်းသင်းမိ၍၄င်းပေါင်းသင်းမိ၍၎င်း ၊<br />
(ဇ) သူတပါး၏တရားစကား နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ဒိဌိ ဖြစ်လာပါတယ်။<br />
(က) ဘုရားရှင်၏ ၃၂-ပါးသော လက္ခဏာတော်များ ၊ ဉာဏ်တော်များ နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(ခ) သစ္စာ (၄) ပါး ၊ မဂ် ၊ဖိုလ် ၊နိဗ္ဗာန် သည် သံသရာမှ တကယ် လွတ်/မလွတ် နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(ဂ) အရိယာပုဂ္ဂိလ် နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(ဃ) သီလ ၊ သမာဓိ ၊ပညာ ဟူသော သိက္ခာ (၃) ပါးနဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(င) အတိတ်၌ ခန္ဓာ ၊အာယတန ဖြစ်/မဖြစ် နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(စ) အနာဂတ်၌ ခန္ဓာ ၊အာယတန ဖြစ်/မဖြစ် နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ၊<br />
(ဆ) သံသရာ တလျှောက်လုံး ခန္ဓာ ၊အာယတန ဖြစ်/မဖြစ် နှင့် ပေါင်းသင်းမိ၍၄င်းပေါင်းသင်းမိ၍၎င်း ၊<br />
(ဇ) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် နဲ့ ပတ်သက်၍ ၄င်း၎င်း ဝိစိကိစ္ဆာ ဖြစ်လာပါသည်။<br />
၄င်းတို့မှာ၎င်းတို့မှာ ကိလေသာ ( ၁၀ ) ပါး (အပြား ၁၅၀၀ )ဖြစ်ပါသည်။
ကိလေသာကို အမျိုးအစားအားဖြင်.လည်း ခွဲလို့ရပါသေးသည်။
ပဋ္ဌာန်းမှာ ကမ္မပစ္စယော တိ - ကုသလာ ၊ကုသလံ - ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သော ၊ ကမ္မံ - ကံသည် ၊ဝိပါကာနံ - အကျိုးဖြစ်ကုန်သော ၊ ခန္ဓာစ - နာမ်ခန္ဓာ တို.အား၄င်းအား၎င်း ၊ ကဋတ္ထာစ ရူပါနံ - ကမ္မဇ ရုပ်တို.အား၄င်းအား၎င်း ၊ ကမ္မပစ္စယေန- ကမ္မပစ္စည်း(ကမ္မအကြောင်း) ဖြင်. ၊ ပစ္စယော -ကျေးဇူးပြုသည်၊ ဟောတိ - ဖြစ်၏ ။ …..
စေတနာ - စေတနာသည် ၊ သမ္ပယုတ္တကာနံ - ယှဉ်ဖက်ဖြစ်ကုန်သော ၊ ဓမ္မာနံစ - တရားတို.အား၄င်းအား၎င်း ၊ တံသမုဋ္ဌာနာနံ - ထိုစေတနာကြောင့်ဖြစ်ကုန်သော ရူပါနံစ - စိတ္တဇရုပ်တို့အား၄င်းစိတ္တဇရုပ်တို့အား၎င်း ကမ္မပစ္စယေန- ကမ္မပစ္စည်း(ကမ္မအကြောင်း) ဖြင်. ၊ ပစ္စယော -ကျေးဇူးပြုသည်၊ ဟောတိ - ဖြစ်၏ …ဟုဆိုသည်။
ထို့ဗကြာင့် ကောင်းခြင်းကိုပြုသောကြောင့် ကောင်းတာဖြစ်ကာ၊ မကောင်းခြင်းကိုပြုသောကြောင့် မကောင်းတာဖြစ်တတ်သကဲ့သို့ ၊ ကောင်းခြင်းကိုပြုသောကြောင့် ကောင်းတာမဖြစ် ၊ မကောင်းခြင်းကိုပြုသောကြောင့် ကောင်းတာဖြစ် တတ်သည့် ဖြစ်စဉ်များလည်းရှိပေသည်။
မစ္စုဟူသည်မှာ သေခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ သေခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံရှိသည်။ အခြားသော ဘာသာဝင် တွေကလည်း ဘာကြောင့်သေရသည်ကို အမျိုးမျိုး အကြောင်းပြကြပါသည်။ အခြားသော ဘာသာများ၏ သေခြင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်တွေကို မတင်ပြလိုပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အလိုတွင်မူ မွေးလို့ သေရသည်။ မသေလိုလျှင် နောက်တဖန် မွေးဖွားခြင်းမခံရစေရန် ယခုဘဝအား နောက်ဆုံး မွေးဖွားခံရခြင်း ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြရမည် ဟုဆိုသည်။
မွေးဖွားလာလျှင် အကြောင်း (၄) ချက်ကြောင့် ပြန်သေကြရသည်။ ၄င်းတို့မှာ၎င်းတို့မှာ-
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/342301" မှ ရယူရန်